China ukusika ukhuko lweCricut, 9924, 12 ″ x24 ″ ukusika umatshini wokwenza umenzi wovuyo kunye nefektri | UAllwin
Ukucanda ukhuko for Cricut, 9924, 12 ″ x24, Cutting Mat for Cricut Joy uMenzi
Sebenza ngokugqibeleleyo kwiCricut Phonononga i-Air 2 yokugqibela yomatshini wokusika we-elektroniki we-DIY
Ukubambelela okuqinileyo kokuncamathela kwimethi kulungiselelwe izinto ezinobunzima bokukhanya, izinto ezicetyiswayo zekhadikhadi elingqindilili, ikhadi lezinto ezibengezelayo, izinto zemagnethi, ibhodi yeposta, ilaphu eline-stiffener.
Umatshini wokusika obuyiselweyo wenziwe ngePrimyum esemgangathweni yePVC, i-Adhesive tacky Cutting mat nge12 * 24 (intshi)
• Gcina isiciko sefilimu esicacileyo kwezi silhouette zize zisike imethi xa ivenkile ukugcina ukusika ukhuko olunamathele ngaphandle kweenkunkuma nothuli. Sebenzisa i-scraper ukukrazula iziqwenga ezingaphezulu kunye ne-spatula ukususa ngononophelo imifanekiso esikiweyo.
• Ezi Mats zinenqanaba elifanelekileyo lokubamba imathiriyeli yakho ngokuqinileyo ngexesha kwaye ivumela ukususwa ngokulula kwemathiriyeli. Ukusika umatshini kulungile kubenzi bobuchwephesha, i-quilters, abafundi bezobugcisa kunye nee-hobbyists zokwenza uninzi lweeprojekthi ze-DIY.
Inombolo yeModeli 9924
Imilinganiselo yemveliso (ubungakanani obupheleleyo) 330x660 mm
Suit for Machine KwiCricut Jonga uMoya 2
Egqithileyo Ukucanda ukhuko lweCricut, 9912, 12, x12, Ukusika iMat yoMenzi weCricut
Okulandelayo: Maleko 5 A0 Cutting Mat, 661A0, Self ukuphilisa mat ukusika mat
Maleko 3 A2 Cutting Mat, 883A2, Self unyango Cu ...
Maleko 3 A4 Cutting Mat, 883A4, Self ukuphilisa Cu ...